Fanaraha-maso kalitao | Hebei Da Shang Wire Mesh Products Co., Ltd.
Mino izahay fa "Ny lamba tariby tsara dia afaka miteny ary ny harato tsirairay dia tokony ho mendrika". Heverinay fa ilaina ny famakafakana ireo firafitry ny simika, ny fananana ara-batana ary ny fifehezana ny fandeferana ary manampy ny lamban-tariby mba hampiseho ny zava-bitan'izy ireo tsara indrindra amin'ny fampiasana ny mpanjifa ary koa amin'ny toe-javatra sarotra iasana.
DASHANG dia manana dingam-pandinihana mafy ny akora ilaina amin'ny famoronana simika sy ny toetra ara-batana.
Amin'ity spectromètre ity (Spectro avy any Alemana) dia dinihintsika ny fitambaran'ny akora simika amin'ny akora (ny atin'ny singa Cr sy Ni) raha mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena.
Aorian'ny fanaraha-maso voalohany dia halefa any amin'ny atrikasa ho an'ny fanaovana tariby ny akora. Hajanona ny fizotran'ny sary mandra-pahatonga ny savaivon'ny tariby hisintona amin'ny habeny tadiavina amin'ny fanenomana.
3. fanandramana karbôna-solifara
Rehefa mandray ny akora isika dia hizaha toetra ny karbaona sy solifara amin'ny tariby vy tsy misy fangarony mba hahazoana antoka fa mifanaraka amin'ny fenitra sy ny kalitaon'ny kalitao sy ny solifara.
Rehefa vita ny fanaraha-maso voalaza etsy ambony, dia haka santionana iray hafa izahay ho an'ny fitsapana amam-panahy. Ny santionany dia hapetraka eo anelanelan'ny ampahany misarika sy ny ampinga fametahana ny tester ho an'ny fanandramana fitiliana hijerena raha toa ka mahafeno fepetra ny tanjaka fihenan'ny vokatra.
Izy io dia manana refy kely indrindra 0,002mm. Amin'ny alàlan'ny fandrefesana marina, ny fanohanana ara-bola sy ny fampandrosoana dia azo tohanana, raha ny fizotry ny famokarana kosa dia azo fehezina sy ahitsy ara-potoana, manome toky filtration mesh mifanaraka amin'ny takian'ny mpampiasa. Ho fanampin'izany, ny fahaverezan'ny fampiasana dia azo ahena, vokatr'izany dia mampihena ny vidin'ny famokarana.
Alohan'ny hanenomana, ny teknisianinay dia hijery raha toa ny milina fanenomana CNC napetraka sy miasa tsara.
Mandritra ny fizahan-toetra ny fitsarana, ny mpiasan'ny QC anay dia hijery raha mifanaraka amin'ny fepetra takiana mifanaraka amin'izany ny fisian'ilay vokatra.